Uru nke ime SEO na YouTube maka ecommerce | ECommerce ozi ọma
Uru nke ime SEO na YouTube maka ecommerce
Nweta ndị ọrụ site na usoro vidiyo bụ omume na - eto eto. N’ezie, mgbe ọrịa coronavirus na-efe efe, vidio amụbawo ọhụhụ ha. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke ahụ Google na-ele ọdịnaya ọdịyo anya nke ọma, ekwesịrị iburu n'uche akaụntụ eCommerce gị. Ugbu a, ikwesiri ime ezigbo SEO na YouTube iji nweta nsonaazụ ọma.
Ọ bụrụ na ịchọrọ mara otu esi eme SEO na Youtube, ihe mere anyị ji akwado ya, yana usoro ndị ọrụ gị ga-eji nwee ịhụnanya, wee kwụsị ịgụ ihe anyị kwadebeere gị.
1 Kedu ihe kpatara ịnwe ọwa YouTube maka eCommerce gị bụ ezigbo echiche
2 Kedu ihe kpatara YouTube ga-eji melite SEO nke eCommerce gị
3 Usoro SEO maka Youtube: Mee ka ọ daa na eCommerce gị!
3.1 Nyochaa ndị na-ege gị ntị
3.2 Isiokwu ọchụchọ
3.3 Na-ebuli aha na nkọwa nke vidiyo ọ bụla
3.4 SEO na Youtube: Mkpado
3.5 Kpachara anya na ogo nke ọdịnaya
Kedu ihe kpatara ịnwe ọwa YouTube maka eCommerce gị bụ ezigbo echiche
Mgbe ị mepere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, eCommerce, ihe mbụ ị chere bụ na ị kwesịrị ilekwasị anya n'inye weebụsaịtị nke dị mfe ịnyagharịa ma maa mma dịka o kwere mee. I kwukwara eziokwu. Mana ị ga-amararịrị na n'oge a ọdịnaya nke na-agagharị na Internetntanetị, na 80% nke ikpe, sitere na vidiyo. Nke ahụ pụtara na n'agbanyeghị agbanyeghị mma eCommerce gị, ma ọ bụrụ na amabeghị ya, ị gaghị enweta ihe ọ bụla.
Ya mere, jiri netwọkụ mmekọrịta. Mana, otu n'ime ndị anyị na-akwụ obere nlebara anya bụ YouTube. Ma taa ọ bụ nke nwere ike inye gị ọtụtụ elele.
Otú ọ dị. Anyị maara na eCommerce nwere ike ọ gaghị enwe ụlọ ahịa anụ ahụ, yabụ na ịgaghị enwe ike ịdekọ ọtụtụ vidiyo nke ahụ. Nwedịrị ike ị gaghị enwe ngwaahịa ahụ, n'ihi na ị goro ụlọ ọrụ ọzọ ọrụ maka ilekọta ibupu ngwaahịa a, naanị ị gụnyere katalọgụ nke ndị a. N'okwu ndị ahụ, ọ na-esiri anyị ike ịnye ọdịnaya anya. Ma ọ bụ ọ bụghị.
Gini ma igha eji ihe eji ahia gi? Gini mere ị ga - eji kwue okwu metụtara nsogbu ahia gi? Ha bụ isiokwu izizi na-anaghị elekwasị anya na "zụta, zụta, zụta", nke na-agbakwunye uru na nke na-eme ka eCommerce gị kwenyekwuo.
Ma nke a bụ ihe kpatara ịkụ nzọ na ịnwe ọwa YouTube. Mana, iji ya mee ka ọ rụọ ọrụ, ị ga-ama otu esi eme ezigbo SEO na YouTube.
Kedu ihe kpatara YouTube ga-eji melite SEO nke eCommerce gị
I chere na ịmụ ịme SEO na YouTube agaghị emetụta ihe ọ bụla na eCommerce gị? Eziokwu dị nnọọ iche.
SEO doro anya na-ewetara gị n'okporo ámá ilu. Ọ bụ ihe dị mgbagwoju anya na ị gaghị amacha ihe ị ga - eme iji rite uru na ya ma melite ọnọdụ gị. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke ahụ, mgbe ọ dị gị ka ọ bụ gị nwe ya, iwu na-agbanwe ma ha na-agba gị ara n’ihi na ha anaghị agwa gị ihe ha gbanwere, ihe na-agba ọchịchịrị.
Mana eziokwu bu na taa audiovisual ọdịnaya bụ otu n'ime ndị kasị hụrụ n'anya Google na na-ime ya elu karịa ndị ọzọ ọdịnaya. Yabụ, site na vidiyo ị ga-enweta ọhụhụ ka ukwuu, nke ga-atụgharị gaa na nleta ndị ọzọ na eCommerce gị. N'ezie, ọ bụrụ na ịmeela ezigbo SEO na YouTube, ọ dịkwa na eCommerce gị, ị ga - enweta ọtụtụ uru karịa ndị asọmpi gị.
Tinyere ihe ndị ọzọ, na YouTube ị ga-enwe ike - wuo njikọ njikọ n'efu, Nke ahụ bụ, ịnwere ike itinye njikọ na weebụsaịtị ma ọ bụ ọdịnaya gị yana Google ga-eji ezigbo anya hụ ya. I nwekwara ike itinye vidiyo metụtara isiokwu ị na-eme. Ma ọ bụrụ na i tinyeworị onwe gị dị ka onye na-emetụta ihe, ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-emeri.
Usoro SEO maka Youtube: Mee ka ọ daa na eCommerce gị!
Ugbu a ị matara ihe ọzọ banyere SEO na YouTube, anyị achọghị ịhapụ isiokwu ahụ n'ebughị ụzọ kwuo maka usoro ndị ahụ nwere ike inyere gị aka ime ka ndị ọrụ eCommerce gị nwee ịhụnanya. N'ezie, ọ bụrụ na ịnweghị ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọ pụtaghị na ịnweghị ike iji ha, n'ezie, a na-eji ha maka ọwa YouTube ọ bụla.
Nyochaa ndị na-ege gị ntị
Otu n'ime nnukwu mmejọ anyị na-eme bụ iche na ọwa anyị nwere ike ịmasị onye ọ bụla. Ọ bụghị eziokwu. Iji maa atụ, were ọwa egwuri egwu. Ọ ga-amasị ụmụaka na ezinụlọ nwere ụmụ. Ma di na nwunye na-enweghị ụmụ agaghị enwe mmasị na ihe ụmụaka (ma ọ bụrụ na ha bụ ndị nchịkọta ma ọ bụ ndị yiri ya).
Ya mere, ọ dị mkpa na kọwaa ihe ndị na-ege gị ntị ga-abụ, n'ihi na n'ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ilekwasị anya na ha.
Ikwesiri ima ihe bu isiokwu ndi ga - eme ka ọdịnaya gi di elu. You nwere ike ime nke a n'ụzọ abụọ dị iche iche:
Na-amụ asọmpi gị na ihu ihe Keywords ha jiri mee otu ihe. N'ụzọ dị otú a, ị ga-arịgo n'ọkwá ma nwee ike idobe ọwa ahụ. Ma ọ bụghị ọdịiche dị na ya, anya.
Chọ Keywords na-adịghị otú na-erigbu. Ee, ọ ga-ewe obere oge, mana a ga - enwe ọdịiche dị iche n'etiti ndị na - asọ mpi, nke nwere ike ịdọta, n'ime ndị na - ege gị ntị, ndị ọzọ ga - eme ka ọnọdụ gị ka mma.
Nkwado anyị? Mee ha abụọ. Keywords ị maara ọrụ ma gbalịa ndị ọhụrụ iji hụ ma ị rụpụtara nsonaazụ ọma.
Na-ebuli aha na nkọwa nke vidiyo ọ bụla
Iji isiokwu ndị ahụ ịchọtala, ị ga-ewu aha na nkọwa nke vidiyo.
Banyere aha, ihe kachasị mma bụ nke ahụ tinye okwu di ike n'ime ya, mana imepụta ahịrịokwu na-adọta uche, nke na-edozi nsogbu ndị ọrụ, wdg. Dị ka ihe atụ, were ya na ị kpachaara vidio vidio okooko osisi orchid. Nọmalị na Google ị ga-etinye nke ahụ na njin ọchụchọ gị, mana aha dị ka nke ahụ agaghị adọta uche. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na itinye "Otu esi eme transplant orchid nke na-azọpụta osisi gị na ọnwụ ụfọdụ" enwere ike ị ga-enwe ndị ọzọ na-ege ntị.
Na nkọwa, ị ga-etinye dịkarịa ala 500 odide, ebe ị na-akọwa dị ka mma dị ka o kwere ihe video banyere. Nke ahụ bụ ebe ịkwesịrị ịgụnye isiokwu ahụ na gbakwunye njikọ (dịka ọmụmaatụ na eCommerce gị).
SEO na Youtube: Mkpado
Mkpado, dịka na netwọkụ mmekọrịta, na-aba oke uru n'ihi na ị na-enyere ndị ọrụ aka ịchọta gị. Otú ọ dị, Ọ dịghị mma ka elu-na-ebuli akụkụ a, n'ihi na ị nwere ike nweta mmetụta ọzọ. Iji mee nke a, nzọ na isiokwu na okwu metụtara ọdịnaya ị biputere.
Kpachara anya na ogo nke ọdịnaya
Vidio e dekọtara nke ọma, nke a na-anụkarị, ma dezie ya nke ọma agaghị arụ ọrụ iji melite SEO na YouTube ma ọ bụ dozie ọwa eCommerce gị. Ikwesiri inye ya ụfọdụ mma gị video, na mgbakwunye na ozi nke n'ejere ha ozi maka ihe. Ma ọ bụghị ya, ọ gaghị amasị onye ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » elekọta mmadụ media » Uru nke ime SEO na YouTube maka ecommerce
Ihe ntanetị 5 kachasị ewu ewu n'ịntanetị
Gịnị bụ fungi dị iche iche